अटोमोबाइल ब्रेकिंगको सिद्धान्तहरू
ब्रेक व्हील सिलिन्डरमा मुख्यतया ब्रेक बेस प्लेट, ब्रेक जुत्ता, घर्षण अस्तर, विस्तारकर्ता, एयर कक्ष, धुलो रोक्न कभर र वसन्त हुन्छ। जब यो काम गरिरहेको छ, पुशिंग रडले वायु चेम्बरको कार्य अन्तर्गत बललाई छुट्ट्याउन एक्सप्यान्डरमा पाचरलाई धक्का दिन्छ। को भाग ...
वेज ब्रेक विस्तारकको लागि नयाँ निरीक्षण मेशिन
कसरी काम गर्ने? निरीक्षण मेशिनको उद्देश्य एक वेज ब्रेक एक्सप्यान्डर टेस्ट बेन्च प्रदान गर्नु हो, जुन एक्सटेन्डरको स्व-समायोजन समारोह स्वचालित रूपमा पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ, निरीक्षणका चरणहरू निम्नानुसार छन्: १. एउटा फ्रेम सहित, वेज ब्रेक एक्सप्यान्डर टेस्ट बेन्च, ...
अटोमोबाईल ब्रेक उपकरण
विश्वव्यापी मध्यम र भारी ट्रक बजारमा, ब्रेक मास्टर सिलिन्डरहरू बिभिन्न छन्। एउटा वायमेटिक डिस्क प्रकार हो, जुन युरोपमा लोकप्रिय छ र चीनको वरिपरि कडा प्रचार गरिएको छ। साथै त्यहाँ एक वायबेटिक वेज ड्रम प्रकार छ जुन FAW J7 द्वारा चीनमा लागू गरिएको छ। वायवाटिक क्यामशाफ्ट ड्रम प्रकारको बाहेक मो हो ...